Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Hirshabeele oo maanta gaaray magaalada B/weyne (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha Hirshabeele oo maanta gaaray magaalada B/weyne (SAWIRO)
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa maanta soo gaaray magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ka dib markii uu kasoo amba-baxay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Socdaalka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ee magaalada B/weyne oo uu ku wehlinayo Maxamed Cabdi Waare oo kula tartamay xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay uu ku tago halkaasi, tan iyo markii xilka loo doortay maalintii Isniinta ahayd ee lasoo dhaafay.
Wafdiga madaxweynaha Hirshabeele ayaa waxaa si diiran garoonka magaalada B/weyne ugu soo dhaweeyay xubnaha ugu sareeya ee maamulka gobolka Hiiraan iyo shacabka ku dhaqan magaaladaas.
Uljeedka safarka madaxweynaha Hirshabeele ee magaalada B/weyne ayaa la sheegayaa inuu yahay sidii uu kulan ula yeelan lahaa Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif iyo iyo duubabka reer Hiiraan ee ku sugan magaalada B/weyne.
Dhinaca kale, warar hoose oo aynu heleyno ayaa inoo sheegaya in madaxweyne Cali C/laahi Cosoble uu sidoo kale doonayo sidii uu dadka reer Hiiraan ugu qancin lahaa inay aqbalaan maamulka Hirshabeele.
Lama oga in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu yeeli doonno inuu la kulmo madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo inkale.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa la xasuustaa inuu ka mid ahaa odayaal dhaqameedyaddii sida weyn uga soo horjeeday shirka Jowhar ee maamulka loogu sameeynayay gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ee Hirshabeele.
Ilaa iyo haatan lama oga inta maalin uu madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble sii joogi doonno magaalada B/weyne, inkastoo la sheegayo in halkaasi ay ka dhici doonto xafladda isaga iyo ku-xigeenkiisa loogu caleemo saari lahaa.